Kooxdee ku guuleysaneysa Premier League - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka bb
Image caption Seddaxda tababare ee kooxaha isku haysta guusha koobka horyaalka Ingiriiska
Loolanka sanadkan ka taagan hogaanka, waxa uu yahay mid kamid ah kii ugu adkaa taariikhda, oo lagaran Premier League, oo ay isku haystaan Liverpool, Chelsea iyo Manchester City, maalinta ugu dambeyso ayaana la ogaan karaan midda ay guusha raacidoonto.
dhanka kala duwanaanshaha goolasha, Man City, ayaa hogaanka u hayso taasoo 2012 kii koobka ku heshay goolasha.
Sanadkii 1999-kii Man United ayaa hal gool ay ka dheereed Arsenal u suura geliyay inay goobka ku guuleysato.
Waxaa intaa dheer, Chelsea hadda waxay laba dhibic ka hooseynsaa Liverpool pp hagaanka hayso, fursadaasina waxay heshay markii Liverpool ay barbardhac gashay iyo guushii Chelsea ay ka heshay Anfield kadib markii 2-0 ay kaga guuleysatay naadiga hogaaminayo ciyaaraha.
Labadan koox waxaa mid kastaa u dhiman laba kullan oo keli ah waxeyna ku xirantahay sida ay ugu guuleystaan kulalmadaasi.
Image caption Ciyaartii Liverpool ay la yeesheen N City
Image caption Ciyaartoyda kooxda Chelsea
Image caption Chelsea Man City
Balse, Man City oo loona adag ku jirto, haddii ay ku guuleysato dhammaan saddexda kullan ee u dhiman waxaa suurtagal ah inay sanadkan guusha raacdo.
City waxaa fursadda ka heleysaa saddexda dhibic ee ay ka hooseyso Liverpool, waxaana laga yaabaa in ay goolal badni ay ku qaadato koobka Premier league.
Maalin ka hor ciyaartii Liverpool iyo Chelsea, Mark Lawrenson oo ka faallooda ciyaaraha waxa uu sheegay inuu filaayo in si weyn ay u guuleysato Liverpool, balse markii ay Chelsea adkaatay, hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay inaan sadaal laga bixin karin illaa ay ciyaaraha dhmaadaan mooyee.
Guushaasi Chelsea ayaa dhalisay isqabqabsi u dhexeeyo Liverpool, Chelsea iyo City.
"Liverpool Waa inay horyaalka sanadkan ku guuleysataa, sababtoo ah Chelsea way adkaaneysaa sanadka dambe, City, Arsenal iyo Man United ayaa dhankooda isasoo adkeyndoono. Tani waa fursadooda, haddii ay seexdaanna uma wanaagsano."
Isbedelo way dhici karaan, kooxna waxaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo, laakiin xaalad xun oo tartan adag u baahan ayaa u dhexeeyo sadaxda naadi ee ugu sareeya.
Image caption ciyaar adag oo dhexmartay Everton iyo city